Casharkaan oo cinwaankeedu yahay Hiwaayadeena Jarmal, waxaan ku baran doonnaa inaan u sheegno hiwaayadeena Jarmal, inaan qof wax ka weydiino waxyaabaha ay xiiseeyaan ee Jarmal iyo inaan sameyno jumlado ku saabsan hiwaayadaha Jarmalka.
Ugu horreyntii, aan aragno hiwaayadaha Jarmalka ee aan isticmaalno oo aan la kulanno inta badan nolol maalmeedka, labadaba Turki iyo Jarmal. Kadib waxaan baran doonnaa sida loo weyddiiyo hiwaayad af Jarmal oo la yiraahdo hiwaayad af Jarmal ah oo leh muxaadaro faahfaahsan iyo tusaalooyin badan. Waxaan sameyn doonaa weedho qeexaya hiwaayadaha Jarmalka.
Waxaan awoodi doonnaa inaan weydiino qof Jarmal ah waxa ay yihiin hiwaayadooda ama hiwaayadooda, iyo haddii qof na weydiiyo waxa ay yihiin hiwaayadeena ama hiwaayadeena, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan noo sheegno waxa ay yihiin hiwaayadeena ama waxyaabaha aan xiiseyno ee Jarmal ka ah.
Waxaan si taxadar leh ugu diyaarinay kuwan oo dhan martida almancax waxaanan u soo bandhignay adeegsigaaga. Hadda, ugu horreyntii, baari sawirrada hoose ee aan si taxaddar leh ugu diyaarinnay booqdayaasha almancax.
Inta aad baraneyso hiwaayadaha Jarmalka, aan ku xusuusinno in xarfaha waaweyn ee magacyada gaarka ah iyo kuwa guud ee luqadda Jarmalka lagu qoro xarfaha waaweyn, sida aan ku soo xusnay casharradeena hore ee Jarmalka, laakiin xarfaha hordhaca ah waxaa lagu qoraa xarfaha yaryar.
SHARBIYADA Jarmalka DALKA Faahfaahinta Mowduuca
Hiwaayadaha Jarmalka -magacaabay
Hiwaayadaha Jarmalka - Muusiga Hören - Dhageysiga Muusikada
Hiwaayadaha Jarmalka - Buch lesen - Akhriska
Hiwaayadaha Jarmalka - Fußball spielen - Kubadda Cagta
Hiwaayadaha Jarmalka - Basketball spielen - Kubbadda Koleyga
Hiwaayadaha Jarmalka - sawirgrafieren - Qaadashada Sawirro
Hiwaayadaha Jarmalka - Gitarre spielen - Ciyaarista Gitaarka
Hiwaayadaha Jarmalka - Klavier spielen - Ciyaarista Biyaano
Hiwaayadaha Jarmalka - schwimmen - Dabaasha
Hiwaayadaha Jarmalka - Rad fahren - Baaskiil wadid
Hiwaayadaha Jarmalka - Sport machen - Jimicsi
Hiwaayadaha Jarmalka - kochen - Karinta
Hiwaayadaha Jarmalka - tanzen - Qoob-ka-ciyaarka
Hiwaayadaha Jarmalka - Reiten - Raacitaanka
Hiwaayadaha Jarmalka - reisen - Socdaal
SHIBBAD WEYDIINTA XUKUNKA JARMALKA
Hiwaayadaha Jarmalka ee Weydiinta iyo Xukunka Hadalka
Haddii aan rabno inaan qof weydiinno waxa ay hiwaayaddoodu tahay af Jarmal, waxaan isticmaalnaa qaabkan soo socda.
Waa maxay hiwaayaddaadu?
Sind deine Hobbys ma ahaa?
Waa maxay hiwaayadahaagu?
IS WEYDIINTA IYO LA HADLIDDA HOBYADA GERMAN (XUKUN KELIYA)
Sida ka muuqata weedhaha kor ku xusan, was is dein Hobby xukun waa maxay hiwaayaddaadu Waxay ka dhigan tahay. Was sind deine Hobbys xukunku waa jamac Maxay yihiin hiwaayadahaaga Waxay ka dhigan tahay. Tan iyo markii aan ku sharaxnay fikradaha jamaciga ah ee jumladahaan, farqiga udhaxeeya mein iyo meine, iyo farqiga udhaxeeya ist iyo sind ee muxaadarooyinkeenii hore, halkaan dib ugamahadleyno markale.
Waa maxay hiwaayaddaadu su’aasha ah; Hiwaayadaydu waa akhris, hiwaayadaydu waa dhageysi muusig, hiwaayadaydu waa baaskiil, hiwaayadaydu waa dabaasha. Waxaan bixin karnaa jawaabaha noocaas ah. Qaabka lagu dhaho xukun hiwaayadeed af Jarmal waa sidan soo socota. Haddii aan kaliya heeseyno mid ka mid ah hiwaayadeena, waxaan isticmaalnaa qaabka soo socda.
Jumladda kor ku xusan, waxaan ku keenaynaa waxa hiwaayadeena ah meesha dhibcaha leh. Tusaale ahaan;
Was is dein Hobby? : Waa maxay hiwaayaddaadu?
Mein Hobby ist schwimmen : Hiwaayadaydu waa dabaasha
Mein Hobby ist singen : Hiwaayadaydu waa heesaysaa
Waxaan bixin karnaa tusaalooyin sida. Qaabkani waa kan kaliya ee la isticmaalo haddii aan xuso mid ka mid ah hiwaayadahayada. Haddii aan leenahay wax ka badan hal hiwaayad oo aan dooneyno inaan dhahno wax ka badan hal hiwaayad, waxaan u baahanahay inaan isticmaalno qaabka jamac ee soo socda.
ISWEYDIINTA IYO LA HADLIDDA HOBYADA DALKA JARMALKA (XUKUN BADAN)
Dabcan, qofku wuxuu yeelan karaa hal hiwaayad ama in ka badan hal hiwaayad. Hadda sidoo kale Maxay yihiin hiwaayadahaaga Aynu eegno jawaabaha su’aasha; su'aashan jamac hiwaayadeydu waa aqrin iyo dabaal, hiwaayadeydu waxay dhageysataa muusig iyo buugaag akhris, hiwaayadeydu waa baaskiil, dabaasha iyo dhageysiga muusikada Waxaan ku siin karnaa jawaabo badan sida.
Qodobka halkaan lagu tixgelinayo waa kuwan soo socda: Haddii aan xusno mid ka mid ah hiwaayadeena,mein Hobby ist ……Waxaan isticmaalnaa caaryada ”. Laakiin haddii aan dhihi doonno wax ka badan hal hiwaayadood “meine Hobbys sind …… .. ……. …… ..Waxaan isticmaalnaa caaryada ”. Waxaan ku qornaa hiwaayadaha aan rabno inaan ku nidhaahno meelaha dhibcaha leh.
Qaabka jamac ee jumlada hiwaayadda Jarmalka waa sida soo socota.
Xagga sare "meine Hobbys sind …… .. ……….”Waxaa loola jeedaa“ hiwaayadahayagu waa …… ”. Si fiican baad u fahmi doontaa markaad baarto jumladaha tusaalaha ah ee hoose.
Sind deine Hobbys ma ahaa? Waa maxay hiwaayadahaagu?
Meine Hobbys sind singen und schwimmen : Hiwaayadeydu waa hees iyo dabaal
Meine Hobbys sind schwimmen und Buch lesen : Hiwaayadaydu waa dabbaal iyo akhris
Xagga sare, waxaan ku aragnay kelmadaha iyo jamacyada jumladaha iyagoo weyddiinaya hiwaayad af Jarmal kuna leh hiwaayad Jarmal.
Hadda, haddii aad baarto tusaalooyinka sawirada leh ee aan u diyaarinnay booqdayaasha almancax, waxaan rajeyneynaa inaad si fiican uga fahmi doontid mawduuca. Waxaa jira tusaalooyin kala duwan oo ku saabsan jumladaha jumladaha Jarmalka ku dhaha jumlada sawirada soo socda.
XUKUNYADA KU SAABSAN HOBBIYADA Jarmalka
Was is dein Hiwaayad
Mein Hobby ist singen - Hiwaayadaydu waa heesaysaa
Mein Hobby ist Rad fahren - Hiwaayadeydu waa baaskiil wadid
Mein Hobby ist Basketball spielen - Hiwaayadeydu waa ciyaarista kubbadda koleyga
Meine Hobbys sind Tennis spielen und Gitarre spielen - My Hobbies waxay ciyaarayaan tennis waxayna garaacayaan guitar
Meine Hobbys sind Musik hören und reiten - Hiwaayadeydu waa dhageysiga muusikada iyo fardo fuushan.
Aynu Ka Hadalno Hiwaayadahayaga Jarmalka
Hiwaayadeydu waa dhageysiga muusikada
Hiwaayadaydu waa akhris
Hiwaayadeydu waa kubbadda cagta
Weedho hiwaayad Jarmal ah
Haatan aan soo qaadanno tusaalooyin dheeri ah oo dheeraad ah oo aan dhammaystirno mawduuceena hiwaayadaha Jarmalka.
Sawirka aad kor ku aragtay, 8 hiwaayadaha Jarmalka ayaa ku qoran. Aynu hadda ku isticmaalno mid kasta oo ka mid ah hiwaayadaha Jarmalka jumladda.
Hiwaayadaydu waa akhris.
Hiwaayadeydu waa dhageysiga muusikada.
Hiwaayadeydu waa fuulista faraska.
Hiwaayadaydu waxay leedahay tamashlayn.
Hiwaayadeydu waa baaskiil wadid.
Mein Hobbiska ist Basketball spielen.
Hiwaayadeydu waa kubbadda koleyga.
Hiwaayadeydu waxay ciyaareysaa tennis.
Hiwaayadeydu waa ciyaarista kubbadda cagta.
Tijaabi 8-da weedhood ee kore. Waxay yihiin weedho aad u fudud oo ku saabsan hiwaayadaha Jarmalka. U samee weedho sidan adigoo adeegsanaya hiwaayado kala duwan.
Hiwaayadaha Jarmalka ee Tabular
Ugu dambeyntiina, mawduuceena hiwaayadaha Jarmalka, aan ku siinno hiwaayadaha Jarmalka miis.
Waxqabadyada Hiwaayadaha Jarmalka iyo Waxqabadyada Madadaalada Jarmal u dhigma
Biibiile → dhiman Flöte
violin → dhiman geige
Qalab → qalabka das
basketball → Kubadda Koleyga
Kubbadda Laliska → der Laliska
golf → deriska Golf
ciyaaraha → der Sport
Orod → laufen
isboorti → Ciyaaraha treiben
Soco socod → spazieren gehen
Socodka degdega ah → joggen
socod fuula → tug
Kalluumeysiga → kalluunka
Faras fuulid → reiten
La kulanka asxaabta → Freunde treffen
Dukaameysi → einkaufen
Ciyaar biyaano → Klavier spielen
Dhageyso muusig → Laxanka muusikada
akhri → akhri
Qoob-ka-ciyaarka → qoob-ka-cayaar
Sawir qaad → Fotografieren
Ciyaar gitaar → ciyaar gitaar
Tag shaneemo → ins Kino gehen
inuu kubad ciyaaro → Kubadda cagta
Tag jimicsiga → ins Fitnessstudio gehen
Inaad baraf barato → baraf baraf
inuu ciyaaro teniska → ciyaar teniska
Ku ciyaarida kombiyuutarka → Qalabka kumbuyuutarka
Baaskiil wadid → baaskiil
Dabaalan → dabaasha
Rinjiga → lab
Sawir → sawiri
Wax soosaarka dubista → kariyaa
Kari → kochen
Hurdo → seexo
Waxba ha qaban → nichts tun
ma aha: Ereyga "spielen" oo loo adeegsaday af Jarmal wuxuu macnihiisu yahay in wax la ciyaaro ama ciyaar la ciyaaro. Markaad ka hadlaysid hiwaayad, waa inaad eraygan u keentaa bilawga hawsha.
Saaxiibada qaaliga ahow, muxaadaradan oo cinwaankeedu yahay hiwaayadaha Jarmalka, waxaan baranay inaan wax ka weeydiino hiwaayadaha Jarmalka guud ahaan, inaan wax ka weeydiino waxyaabaha ku saabsan hiwaayadaha Jarmalka, inaan wax ka weeydiino waxyaabaha hiwaayadda ah ee Jarmal, iyo inaan ka sheegno waxyaabaha aan xiiseyno ama hiwaayadaha u ah Jarmalka.
Kala weecso weedhahan aad adiguba bartay, waxaad waxqabadyo la samayn kartaa asxaabtaada oo ku saabsan mowduucyada hiwaayadaha Jarmalka. Sidan oo kale, waxaad si dhakhso leh u fahmi doontaa mawduuca oo way yar tahay inaad illowdo.
Tags: Hiwaayadaha Jarmalka ee fasalka 10aad, Hiwaayadaha Jarmalka ee fasalka 9aad, muxaadaro hiwaayadaha Jarmalka, Hiwaayadeena Jarmalka, Ha ka hadlin hiwaayadeena Jarmalka, hiwaayadaha Jarmalka, Jarmal hiwaayado